प्रेम प्रस्ताव कसले पहिला राख्ने ? युवतीको चाहना केटाले पहिला राखोस् !
Posted: 2018-10-17 06:05:18
समयसँगै अहिलेको युवापुस्तामा धेरै परिवर्तन आइरहेको छ । तर पनि केही पुराना मान्यताहरुलाई छोड्न सक्दैनौं ? कुनै सम्बन्धको लागि पहल पुरुषले नै गर्नुपर्ने किन ?
हामी आफ्नो विचारमा त धेरै अगाडि निस्किएका छौं तर, कैयौं मामिलामा अहिले पनि हामी पछाडि छौं ।
युवतीहरुले युवकहरुसँग सम्बन्धको सुरुवात गर्ने आशा गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ?
१. अस्विकारको डर
युवतीहरुको सबैभन्दा ठूलो डर हो रिजेक्सन् । सामान्यरुपमा महिलाहरु पुरुषले आफ्नो प्रेम प्रस्तावलाई अस्विकार गरिदिए भने के होला भन्ने सोच्छन् ।
उनीहरुको मनमा यो कुराको डर हमेसा हुन्छ । ‘उसमा मलाई कुनै रुची छैन । म त्यो स्थितीको सामना कसरी गर्न सक्छु ? अरु मानिसहरुलाई यो कुरा थाहा भयो भने उनीहरुले मेरो बारेमा के सोच्नेछन् ?’
यस खालका धेरै प्रश्नहरु छन् जुन उनीहरुको दिमागमा दौडिरहेको हुन्छ । यसै डरको कारणले उनीहरु जुन युवकलाई मनपराउँछ उनीहरुलाई डेटको प्रस्ताव गर्न हच्किन्छन् र आँफैलाई रोक्छन् ।
२. उसले मेरो बारेमा के सोच्नेछ ?
महिलाहरुलाई आफूलाई कसैले मुल्यांकन गरेको मन पर्दैन । यही कारण उनीहरु पुरुषलाई प्रस्ताव गर्दैनन् । अरुले आफ्नोको बारेमा के सोच्नेछन् भन्ने डरको कारण आँफैलाई रोक्छन् ।
यो असुरक्षाको भावना नै उनीहरुको आत्मविश्वासमा भारी पर्छ । कुनै पनि महिला यो कुरामा डराउँछन् । उनीहयुवकले यो त मेरो टाइपकी युवती होइनन् कि भन्ने सोच्छन् कि भनेर चिन्तित रहन्छन् ।
महिलाहरुको मनमा सँधै पुरुष र आसपासका मानिसहरुले आफूलाई मुल्याङ्कन गर्ने भय हुन्छ ।
३. अरुसँग सम्बन्धमा पो छ कि ?
युवतीहरु विभिन्न खालका सवालहरुलाई आँफै उल्झाउँछन् । आफूले चाहेको पुरुष पहिलेदेखि नै अरुसँग सम्बन्धमा छन् कि भन्ने डरले उनीहरुको अगाडिको कदमलाई रोक्छ । उनीहरुलाई त्यो सम्बन्धको सुरुवातको बारेमा सोध्न पनि सक्दैनन् र यसै डरले पछाडि हट्छन् ।
४. हरेक मामिलामा युवकलाई अब्बल पाउँछन्
महिलाहरु केहि गर्न भन्दा पहिले त्यससँग जोडिएका रिस्कको बारेमा पनि हिसाब गर्छन् । यहि काम उनले कुनै पुरुषलाई अप्रोच गर्नभन्दा पहिले पनि गर्छिन् ।
यदि उनीहरुले आफूले चाहेको युवकलाई हरेक मामिलामा राम्रो पाएमा आँफै पछाडि हट्छन् । उनीहरुको यो सोचले नै उनीहरुलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न रोक्छ ।
५. पर्सनालिटी राम्रो छैन
अहिलेको समयमा कसैसँग पनि यति धेरै समय हुँदैन कि उनीहरुले पर्सनालिटी राम्रो नभएका कुनै व्यक्तिसँग डिल गरुन् । यस्ता व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्न मानिसहरुले धेरै रुची राख्दैनन् ।
महिलाहरुको मनमा पनि यो कुरा गढेको हुन्छ । त्यसैले कैयौं पटक उनीहरु मात्रै व्यक्तिको बाहिरी आकर्षणबाट प्रभावित हुँदा हुँदै पनि स्वभावको कारण पहिले अप्रोच गर्दैनन् ।
उनीहरुको मनमा उसको लुक राम्रो भए पनि उसको पर्सनालिटीले बिल्कुल अलग भयो भने के गर्ने भन्ने सवाल दैडिरहन्छ ।
सेक्स कतिबेला, कतिपटक र कसरी गर्ने ? यस्ता छन् प्रमूख सूत्रहरु
Posted: 2018-06-16 13:09:07
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सेक्सका वारेमा घरि घरी परिभाषा दिनु राम्रो नहोला । अव हुदाहुदै सेक्स यो हो भनेर जानकारी दिनेहो भने त झन तनावै होला । यसको मतलव सेक्स भन्ने कुरावाट सवै परिचीत छन । मानिस मात्रै होईन जिवन जनावर, पशुपक्षिं देखी सवै जसो । अव कुरा गरौं सेक्समा कसरी भरपुर चरम सुख लिने ।...
यी दिनहरुमा महिलालाई अत्याधिक यौन चाहना हुन्छ
Posted: 2018-06-16 07:51:29
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सेक्स प्राकृतिक कुरा हो । हरेक प्राणीले आफ्नो किसिमले कुनै न कुनै तरिकाले त्यसको आनन्द लिइरहेका हुन्छन् । सेक्सको सम्बन्ध प्रजननसँग जोडेर हेरिन्छ । यौनलाई पछिल्लो समय मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा पनि लिइएको छ । मानिस जतिबेला पनि सेक्स गर्न इच्छुक हुँदैन । ...
शाहरुख र सलमानको ‘जिरो’ को टिजरमा कमेडी
Posted: 2018-06-14 21:56:14
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ’जिरो’ को नयाँ टिजर सार्वजनिक भएको छ। टिजरमा अर्का सुपरस्टार सलमान खान पनि देखिएका छन्। इद पर्वको अवसरमा शुभकामना स्वरुप शाहरुखले फिल्मको टिजर सार्वजनिक गरेका हुन्। करिब १ मिनेट २१ सेकेन्ड लामो टिजरमा सलमान र शाहरुखको कमेडी दृश्य र रोमान्टिक नृत्य देख्न सकिन्छ। ...
नेपाली कलाकारमा मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोका फयान बढी
Posted: 2018-06-14 17:33:05
विश्वकपको इतिहासमा सर्वा्धिक महँगो मानिएको ‘२१औँ फिफा विश्वकप २०१८’ आजबाट रुसमा आयोजना हुँदैछ । देश र खेलाडीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गिन थालिसकेका छन् । फुटबलको यो महाकुम्भ मेलासँग नेपाली कलाक्षेत्र पनि अछुत रहन कहाँ सक्छ र ? केही कलाकारले आफ्नो ........
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजको एसएलसी प्रिन्सेस २०१८ को ताज रुचीलाई
Posted: 2018-06-14 10:44:59
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सिजन मिडियाले राजधानीमा बुधबार साँझ आयोजना गरेको ह्वाइट हाउस एसएलसी प्रिन्सेस २०१८ मा धनकुटाको तुलसी मेहर स्कूलबाट एसइई परीक्षा दिएकी १६ वर्षीया रुची धितालले आफ्ना २४ प्रतियोगीहरु लाई पछि पार्दै शीर्ष ताज जितेकी छन । प्रतियोगितामा काठमाडौंको रोजवर्ड स्कूलबाट एसइई दिएकी कृष्टिना वन्तले फष्ट रनरअपको ताज हातपारिन भने उनले विधागत तर्फको वेष्ट स्कीन अवार्ड पनि आफ्नो पोल्टामा पारिन् । त्यसैगरी सेकेण्डरनरअपको ताज पुष्पसदन स्कूलबाट एसइइ दिएकी पाल्मा लामाले जित्न सफल भइन् भने उनले विधागत तर्फ मिस फिटनेशको पनि अवार्ड हातपारिन् । थर्ड रनरअप रिया खड्गी भइन भने ...